Ajụjụ - AfricaArXiv
Gịnị bụ AfricaArxiv?
AfricaArxiv bụ n'efu, mepere emepe na ebe nchekwa dijitalụ nke obodo na-eduzi maka nyocha Africa. Anyị na-enye usoro mmụta na-enweghị uru maka ndị ọkà mmụta sayensị n'Africa ka ha bulite akwụkwọ ọrụ ha, ntinye akwụkwọ, ihe odide a nabatara (post-prints), na akwụkwọ ebipụtara. Gụkwuo banyere AfrikaArxiv ebe a: https://info.africarxiv.org/about
Onye bu onye AfricaArxiv mere?
Ezubere AfricanArxiv maka ndị ọkà mmụta sayensị si Africa site na ọzụzụ niile iji kesaa ihe nyocha ha, gụnyere mmezi akwụkwọ, postprints, koodu na data.
Kedu ihe kpatara anyị ji achọ mgbakwunye akwụkwọ ndozi mbido Africa?
Anyị chọrọ akwụkwọ ndozi ihe ndozi Africa ga - maka:
Mee nyocha ndị Africa karịa ka a na-ahụ anya
Kesaa ihe omuma nke Africa
Kwado mgbanwe nyocha n'ime kọntinent
A na-ejikarị ụlọ ọrụ ndozi ngwa ahịa na-eji usoro Science Science mejupụta otu ụzọ dị mfe ma dị oke mma iji mee ka nchọpụta nyocha nweta. Ndị ọkà mmụta sayensị na-akwado ntinye okwu maka ya enwere usoro nyocha nke ndị ọgbọ metụtara - ma ọ dị iche na mbipụta akwụkwọ na nyocha ndị ọgbọ. N'ọnọdụ ka nke a ka ga - ekwe omume mgbe ị nyefere onye na - ede akwụkwọ ndebanye.
Kedu ka AfricaArxiv si dị iche na akwụkwọ ndị ọzọ na-abịa?
Anyị na AfricaArxiv anyị chọrọ iweta ndị ọka mmụta sayensị Afrịka ka ha bipụta nsonaazụ nyocha ha ozugbo akwụghị ụgwọ. N'ụzọ ahụ, ha nwere ike inweta nzaghachi n'ọrụ ha, meziwanye ya ma kọwapụta ndị ọrụ mmekọrịta maka ọrụ dị n'ihu. Preprints na-etolite ịbụ akụkụ dị mkpa nke Science Science. Inwe nzukota nke putara ihe n’ulo ndi n’ulo nyocha nke Africa nwekwara ike ime ka nyocha di iche na-ekwu okwu ndi Africa.
Anyị nwere olile anya na ọ ga-eme ka ndị sayensị sayensị hụkwuo ọhụụ n’ụwa niile ma tinyekwa aka na mmekorita nyocha intra-Africa. Ihe mejuputara sayensi bu otutu ihe nkuzi di iche iche na otu nyocha nyocha gbasasara uwa dum. Iwulite obodo maka oru a na ighoro otutu mpaghara na-enye ndi sayensi na ndi ozo aka (ndi n’eto iwu, ndi oru ahia, ndi oru ogwu, ndi oru ugbo, ndi oru nta akuko) ichota ihe ha choro.
Kedụ ihe ịma aka ndị sayensị ndị Afrịka na-eche ihu?
Elele dị ala mba ụwa
Ego igbochi egbochi
Ihe mgbochi asụsụ
Ndị ọrụ nyocha Africa na-emebikarị na netwọ nchọpụta ụwa
Olee uru ndị ọkà mmụta sayensị nọ n’Africa ga-erite?
Nleba anya nke ihe nyocha sitere na kọntinenti
Tinye ụfọdụ onu ogugu banyere
Nsonaazụ nyocha kpuchie na akwụkwọ akụkọ mba ụwa?
Nmepụta nyocha nke Afrịka n'ozuzu ya?
Ngwurugwu ka nma ma jikotakwa onwe ha
Anyi nwere olile anya na ndi sayensi n ’Africa ga-amata nke oma banyere nyocha ndi ozo, karie ime ka ndiiche n’etiti sayensi nke anglophone na kọntinenti. Anyị na-agba ndị na-ede akwụkwọ ume ka ha nye nchịkọta dị mkpirikpi na French ma ọ bụ Bekee.
AfricanArxiv ga-ewepụta usoro maka ịchọ ihe dị mkpa maka ndị na - emekọ ihe ọnụ n'ime Africa na n'ofe kọntinent.
Kedu ka ekeputara AfricArxiv?
Echiche biara na AfricaOSH site na Twitter. Meghee Science Framework a na-eweta akụrụngwa maka mbọ ndị obodo na-agba, nke na-ebelata ọnụ ahịa na ịdị mgbagwoju anya ma na-enye ohere maka ilekwasị anya na mmụta banyere ịkwadebe mbido na nkwalite ndị AfricaArXiv.
Anyị na-agakwuru ndị ọkà mmụta sayensị Africa ọ bụla iji tụgharịa echiche na imepe echiche ahụ ma gakwuru ndị ọkà mmụta sayensị iji tinye aka na mkpokọta maka ntinye (PR otu), ọkwa, kọmitii ndụmọdụ ndụmọdụ.
Guo ndi oru nta akuko nke AfricanArxiv ebe a: https://cos.io/about/news/center-open-science-and-africarxiv-launch-branded-preprint-service
Kedu otu esi ejikwa AfricaArxiv?
Anyị nwere otu ọrụ na ịhazi ọrụ ahụ na ntanetị. Mgbe ha nyefere, mmadụ abụọ ma ọ bụ karịa modera ga-elele isiokwu maka izi ezi na mkpa.
Onye kpuchiri ugwo nke ijikwa AfricaArxiv?
Enweghi ego ọ bụla dị mkpa (ego ọzọ karịa ịzụta ngalaba na oge) - mbọ niile na ịrụkọ ọrụ ọnụ bụ ntọala afọ ofufo maka ọganihu na ntụgharị nke sayensị.
Ihe owuwu enyere OSF, nke Centre for Open Science mepụtara, nke na-abụghị uru na-ewulite akụrụngwa maka ngwongwo ọha na eze maka ọrụ nyocha ahụ ma na-akwado mbọ nke ọtụtụ mbọ ndị obodo na-agba iji gbalite usoro Open Science.
Kedụ ka ndị sayensị Africa si eji AfricaArxiv?
Ndị Sayensị Afrịka nwere ike bulite ma akwụkwọ nzụta akwụkwọ ma ọ bụ postprints yana nsonaazụ na-adịghị mma, koodu, datasets, theses, nwekwara ihe ọmụma ọdịnala ebe ọdabara ma dabere na UNDRIP Nkeji edemede 31.
Ha nwekwara ike nyochaa ebe a na-edebe akwụkwọ ha ka ha mata ihe ndị sayensị ndị ọzọ nọ na kọntinenti ahụ na-eme na nyocha ha.
Anyi na-anabata ntinye na Bekee, French na Portuguese yana asụsụ Africa dị ka Akan, Twi, Swahili, Zulu,… ma na-ewu ọdọ mmiri nke ndị editọ nwere ike dezie ntinye akwụkwọ ndị ahụ. Ọ na -adị mfe ịkọwa ọrụ gị n'asụsụ ala gị. Ebe ọ bụ na ọtụtụ ndị ọkà mmụta sayensị Africa na-edo onwe ha n'okpuru ọtụtụ akwụkwọ na nyocha ndị ọgbọ nyocha na French ma ọ bụ Bekee agaghị abụ nsogbu.
Ndi Sayensi Africa nke choro iketa ihe odide ha na AfricanArxiv ma obu akwukwo ozo ha kwesiri iwepu ya, ma oburu na akwukwo ha choro ibiputa ya dabere na ibiputa ihe odide ahu. Ọtụtụ akwụkwọ agụmakwụkwọ na-anakwere mbipụta akwụkwọ mmalite. Anyị na-akwado ịlele SHERPA / RoMEO ọrụ maka nkọwa ma ọ bụ akwụkwọ nkwekọrịta isiokwu nke ibe.
Kedu ihe njiri mara maka ịnabata?
Iwu amụma: nnyefe kwesịrị iru ụfọdụ ụkpụrụ ma na-agbaso ụkpụrụ omume sayensị dị iche iche na ụkpụrụ sayensị mepere emepe.
Ntuziaka nduzi A ga-elezi anya maka izuụka na-esochi ya na ndị sayensị ndị ọzọ si Africa. Anyị ga-ewulite obodo dị ike na-elekọta ụlọ ọrụ ma nọgide na-ahụ maka ha maka njikarịcha na ịkọwapụta ikpo okwu maka ihe ndị akọwapụtara na mpaghara nyocha Afrika.
Kedụ ka aga-esi tinye mgbakwunye data?
Site na edemede odide nke ọ bụla ị nwere ike itinye mgbakwunye na ụdị ọ bụla yana nchekwa na-akparaghị ókè. Naanị pịa, dọrọ na dobe ma ọ bụ họrọ faịlụ n'ime oru ngo ọ bụla. I nwekwara ike itinye aka site na ọrụ ndị ọzọ dị ka Figshare, Dropbox, ma ọ bụ GitHub. Lee ihe atụ https://osf.io/nuhqx/.
Kedu ka m ga - esi melite ụdị odide?
Iji dezie otu n'ime nkwakọba ihe ị nabatara, ịnwere ike imelite ntinye DOI site na iji ụdị mbipụta ederede ọhụụ kachasị ọhụrụ site na akaụntụ gị.
I nwekwara ike tinye ederede ihe enyocha ndị mmadụ ga-eme DOI ka ọ dị ugbu a.
- otu esi eme nke ahụ na OSF: enyemaka.osf.io/hc/en-us/articles/360019930573-Edit-Your-Preprint<
Enwere m ike ibipụta ọrụ m na akwụkwọ dị iche iche mgbe m kesachara akara mbụ m na AfricaArXiv?
AfricaArXiv ya na ndi nyiwe anyi ha bu ihe eji eme ihe eji emeghe ihe ndi ozo ka anyi soro anyi kesara oru anyi akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ Open Access (nchekwa onwe onye). Yabụ ee ị nwere ike itinye akwụkwọ edemede gị na akwụkwọ akụkọ.
Anyị na-atụ aro inyocha https://www.ajol.info/index.php/ajol na https://doaj.org/ journalchọta akwụkwọ akụkọ a tụkwasịrị obi iji bipụta ọrụ gị na ọnụahịa nkwụnye ụgwọ ọnụahịa (APCs).
You nwere ajụjụ ndị ọzọ? Email anyị na ozi@africarxiv.org